DAAWO: Sidee Xasan Sheekh u maareyn doonaa danaha is diidan ee laga leeyahay Somalia? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Sidee Xasan Sheekh u maareyn doonaa danaha is diidan ee laga leeyahay Somalia?
May 22, 2022 Xuseen 12
Soomaaliya oo kamid dalalka dhaca Geeska, ee muhiimka ah ayaa wajahaysa hardanka dalal kamid ah Reer Galbeedka, Bariga dhexe iyo geeska Afrika. Haddaba, Sidee loo maareyn doonaa danaha is diiday ee Somalia ka leeyihiin Turkiga, Qatar, Kenya & Ethiopia?
Bahda Puntland Times, waydin kumahadsantihiin faallooyinka iyo falanqaymaha goshiyeed ee noocaan ah.
Ayaandarrose, waa faallooyin iyo falanqaymo khasaaray maadaama Soomaalidu badankeedu u muuqdaan in ayan ama u bislayn amase u heellannayn inay mowduucyada maskaxeed kuwadaagaan munaaqashooyin iyo doodo hufan oo si ilbaxnimo lagu dheehay la isu weydaarsaday.
Waxaa halkan la iskugu gaadaa in qabyaalad iyo qurunkeeda la isku gano oo looguna tartamo qofka uugu caayda iyo aflaggaadhada xun. Waa madal khasaartay runtii.
Madaama ninkii raga ahaa ee loo bixiyay
(KALIGII-TALIYE) waa uu tagay waxaana yimid
Howlaha is diidan iyo qaribaada shisheeyaha ay ka wadaan Somalia wuxuu ku maareyn doonaa 4sano oo
INDHO QARSI IYO QOSOL
Fg wariye gaylan umada yaan been loo sheegin
Sharci iyo dastuur iyo biil gaalo ayaan qaadan
Umaduna iyo waddankuna iib ma,ahan yaaloo sheegayaa
@ bile keligii taliye waa kan somali meesha xun dhigay lo taliye na warkiiba daa waxa an u baahan nahay isla-talin iyo amar shuura ah
@@Bile aad ayaan uga helay Erayada KALIGII TALIYE iyo LOO TALIYE.Erayga Loo Taliye wuxuu noqondaa sumadda Dowladda Xasan Shiikh waayo astaamihii ayay yeelatay 18 sac kadib markii la doortay.
Caqabaddaha ugu adag waxay ila tahay ee Xasan haystaa Somalida ka dib.
1-Emarates waxay rabaan in ay dhistaan ciidan iyaga u gaar ah 7/10kun hubeeyaan mushaar siiyaan sida kuwa Yemen waa halkaa Farmaajo isku diideen.
2-Kenya waxay aaminsan tahay in DF Jubaland kaba hadlin gar iyo gardarro.Sidoo kale qaadka loo fasaxo.
3-Maraykan wuxuu rabaa in xukunka Xasan Sheekh iyo Tigrey isku xiro.Halkaan Jubaland waa marin muhiim ah qofkii dhulka kala yaqaan.Gaariga ka baxaa Ceelwaaq Somaliya 6/7 wuxuu joogaa Mooyeele Ethiopia OROMO LAND.Waa route ay isticmaali jireen jabhaddii oromada.
Maxaa noo dan ah Somali ahaan?In aan isa sii dilno,qabaail naloo sii kala qaybiyo,Emarate sida Yemen naga yeesho.
@@@ Hanuuniye waa wax laga naxo in intaa shirqool ah naloo maleegayo Soomalina iska hurudo. Madax liidato hogaanka hayso,Laakiin sidii sheekadii Diidiinka meesha naloogu tashanayo soo Allah majoogo? Suurrada La’iilaaf ayaa nagu filan.
Soomaalidu baahi ba’an ayay u qabtaa inay kaxorowdo maanka gurracan ee ay qarannimadeeda iyo dowladnimeeda shakhsi keliya ku koobayso, ayna dhaaddo in qaranka iyo dowladdaba iyada tahay. Waa inay fahamto in maqaamkeedu iyo mansabkeedu kasarreeyaan in lootaliyo oo ayna mudantahay inay taladeeda iyadu heer bulsheed u maaraysato oo iskuna maamusho.
Libinteeduna maangaabyadan sha’nigeedii iyo shimbirkeedii dilay ee Xamar isku bedbeddelaya umahayaan e waxay uugujirtaa taariikhdeeda iyo sooyaalkeeda qarniyo badan u sugnaa ee ay uga hayaantay heeryo qalaad oo aan iyada gayin, kaddib markii ay gumeysigii iska xoraysay. Uma baahna inay iskuhawliso dibindaabyada dalka affarta jaho kagasoo dullaamaya mar haddii ay taariikhdeeda iyo sooyaalkeeda suubban dib u cuskato oo talawaagnimadeedana kutiiriso.
Falsafaddii, qaddiyaddii, iyo hiraalkii awooweyaasheen u kasay oo kusimay martabaddii ay gaalo madow iyo gaalo cadba qummaati iskaga caabbiyeen oo adduunkana baal dahabi ah kaga hooydeen kuwo aan ahayn qarannimo iyo dowladnimo dhab ah oo taam ah inooga masokayso xaqiiqdii. Waana taariikhda iyo sooyaalka kusidkan Soomaalinimada salka kuhaysa Islaamnimada.
Hebelladan maangaabyada ah ee taariikhdeenna iyo sooyaalkeenna ka arradan masiirkayaga ma maareyn karaan oo maqaamkeenna iyo mansabkeenna asalka ahna nagumasimi karaan abid. Waa wada dallaaliin iyo dameerro lagu dhaansanayo. Talada annagaa leh e aynu gacanta kudhigno oo taajkana dib uxiranno sidii awooweyaasheennii halyeeyada ahaa.
SIDEE SOOMAALIYA QARAN KU NOQONKARTAA ???
Soomaaliya waa dal weligiis aan noqon QARAN . Weli waxaa Ku hardamaya qabiilada . Sunnada Qaranimada baa ah sida dalalka caalamka Ka Jira yiin in dadka qaar wax xukumaan qaarna laxumo .. laakiinse Soomaaliya sidaas wey Ka duwan tahay inkasta ay u sii siqeyso in Beel weynta IRIR DAMAALE noqon rabaan hogaamiyaasha Soomaaliya inta kale ay raaciyad u noqdaan . Waanna wada keliyah Soomaaliya uga curankarto GOVERNANCE.
Barre Waxaa wuxuu is qariyaba maanta Shaarka siibtay oo wejigiisa dhabta ahaa ee Mooryaanimo bannaanka keenay, markuu Culusow Villada ku arkay! Kkk
Barre halkan wuxuu in badan soo galay isagoo iska dhigaya nin Majeerteen ah, laakiin Anigu waan sheegay in uu yahay Mooryaan Habargidir ah! Kkk
Barrow marka hore ma jiro Qabiil dhab ah oo Irir la yiraahdo, oo wuxu waa un laangaabyo uu Nacayb Daarood mideeyey oo aanan ab iyo Isir wadaagin!
Marka xigtana, waayba fiicnaan lahayd in aay Dal xukumi karaan, waana la idin taageeri lahaaye, heeykalkeedi ma leedihiin ma leedihiin oo ma xukumi kartaan?! Kkk
Sow adinkaa Durbaba adinkoon xilkii la wareegin sida Yeeydii lacagtii Imaaraadka ee sanooyinka meesha taaley ku yaacay ee hawada ku kala goostay!! Kkk
The Lowcast peoples has always the lowcast behaviour and they can not rule or behave well!!! Kkk
Mudane Madaxweyne Hassan Shiekh waa nin og hawsha u taal.
Ugu horayn waa in Qabiilada Yar Yarka Daarood laga waayo Saaxada Soomaaliya dhamaantood kuwaas oo ugu horeeyaan ilka Yar Mareexaan.
Dawlada Qatar 🇶🇦 waa in la adeeg sadaa Dhaqaale Fara badan laga Qaadaa oo magdhow ah ayagoo lagu qasbayo in ay raali galin ka Baxshaan dhibkii lagula kacay Dadka Reer Muqdisho ayadoo la Adeegsanayo Dhaqaalihii ay Dawlada Qatar 🇶🇦 bixinaysay.
Emaaraadka iyo Reer Muqdisho waa in yeeshaan xiriir wanaagsan Mashaariic badana Emaaraadka ka hirgaliyaan Muqdisho iyo Gobolada kale ee Koofurta Soomaaliya.
Ugu Dambayn waa in aan laga harin Dadkii dhibaateeyey Reer Muqdisho Maxkamadna lasoo taagaa.
Ducaale Kaahiye.!! Kkk
Duqii adeerkaa Caaydiid ahaa ayaa Caro god la galay isagoo faruurta qaniinsan oo leh, Daarood baan cirib tirayaa umana hir väline wax kumaadan qaadan miyaa?! Kkk
Weli ma cirib tir baad u ciil qabtaa Mooryaakiiyow?! Kkk
Culusoow Daarood iyo Mareexaan toona is arki mahayaane, Adigu yuusan Gabdhahaaga gaagaaban ee madmadoow kaa iibsan! Kkk
@Barre waad huruddaa,horta ma jiraa ankee waxbla yiraahdo Hawiye Daarood isaaq?ka dib is weydii in ay shaqaynayso Mareexaan Majeerteen Abgaal Habargidir.